"Ekhaya" sauna Finnish efulethini
Ukuvakashela izindawo zokugeza kanye sauna eminyakeni yamuva sekuvame kakhulu. Othile steamed ezempilo, futhi umuntu ngakho ukuchitha isikhathi nabangane. Kodwa, cishe, ngamunye ngamaphupho ukuthi kwadingeka sauna sakhe yangasese efulethini. Uma lokhu kwakungenakwenzeka ngisho ukukucabanga, kodwa namuhla engokoqobo.
Iyini imfihlo ukuthandwa?
sauna Finnish - omunye ezichumayo nokugeza. Abaningi baphikisa eziphathelene nezingozi nezinzuzo zakho impilo yabantu. Nokho, umonakalo banayo kuyafana ukuthi yezinye sauna (zingabantu esiphikisayo core, umfutho wegazi ophakeme, iziguli ezinemishini nakwezinye izifo kanye nabesifazane abakhulelwe), kanye nokusetshenziswa kubalulekile. Ngakho, i-sauna kunomphumela omuhle esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, umsebenzi emaphashini, ehlanza umzimba ubuthi futhi ukungcola (ine umphumela ngokukhishwa kobuthi egazini), futhi kwandisa ithoni umsebenzi ijwabu imisipha, aqede kubangela ukucindezeleka. Ukuze uthole umphumela kunenzuzo inqubo, isikhathi esichithwa e-sauna akufanele budlule amaminithi angu-15. Sauna Finnish livame ukusetshenziswa yilabo ufuna ukunciphisa umzimba. Nokho, isisindo elahlekile ngokushesha ibuyisela njengoba ilahlekile zanqwabelana uketshezi emzimbeni, hhayi ezikhuluphele. Ngakho-ke, i-sauna muhle kuphela njengoba inqubo esidlulayo uhlelo olunzulu ukuncipha komzimba. Ngokwesibonelo, ukuvakasha njalo sauna usebenzisa Scrubs yemvelo kanye buso yakhishwa isikhumba nokuwohloka ngemva kwesisindo, ubuyele umswakama waso, iphimbo kanye umsungulo.
"Ekhaya" sauna Finnish. isithombe
Ngenxa izimfanelo eziningi kakhulu ezinhle, abaningi abahlala emadolobheni iphupho siqu sauna efulethini. Ngaphezu kwalokho, kuyinto aqede ukucindezeleka futhi ukuqwasha, okuyinto ebaluleke kangaka Idolobha lanamuhla ohlala. Yifake ngisho endlini encane (ongekho amafulethi) uvelele impela nokwenzeka - ubuchwepheshe lanamuhla ungenza hhayi lokho. Njengoba wanquma ukuthatha lesi sinyathelo, wakhulelwa ngempela Ihlanganisa ngezindlela ezintathu. sauna Finnish, ungathenga ngomumo eyenziwe (ukukhiqizwa yezimboni), kungenzeka ukuba babuthane bese ukukhweza siqu sakhe (inqobo nje noma abangane yolwazi olufanele), oda egumbini umusi e inkampani, okuyinto ngokukhethekile ukwakhiwa inhlangano yabantwana sauna ngabanye. Kulokhu, igumbi umusi izofakwa futhi wabutha kuphela okukhethwa kukho okutholakalayo amafulethi namakamelo, lapho sauna ziyokuma.
sauna Finnish e izimo efulethini
Abaklami lenkampani uyoveza izilinganiso, ukubala inani kanye nezindleko zokwakha, akunike lesisho bese uqhubekela phambili ekukhiqizeni umusi. Ukufakwa uyophinde kufakwe ohlwini jikelele imisebenzi. Ama-sauna eqoqwe "turnkey" (kuncike ubuqotho yomenzi), kwakuvumelana ekamelweni, kanye nomsebenzi wabo kuhambelana noHlelo "izici" yokuxhumana efulethini ethize. Factory njengoba umusi akakwazi ukukhipha emdulini noma ingashintshwa ukuze zokuxhumana idatha. Ngo ezifana icala kuzodinga ezengeziwe ukufakwa umsebenzi. sauna Finnish ngokuvamile ibekwe ku zangasese (zikhona abakhwabanisi amanzi nokunye. D.). Nokho, zikhona izikhathi lapho efakiwe kwi Loggia ububanzi sekuqala ukufudumala. Ukuze le ndlela kuyodingeka ukuba adabule lonke efulethini ukuxhumana ekhethekile akunakwenzeka njalo. Ikhaya sauna lusekelwa ngamandla kagesi, futhi ukugeleza yayo ingamaphesenti kungaba ephawulekayo. Izindleko isilinganiso kokufaka sauna efulethini iqala kusukela ayizinkulungwane 100. Ruble ngaphandle ukufakwa.
A kancane ngalokho kukhona namapayipi amunca amanzi ngoba izihlambi
Labathaki bamafutha "Haiba": tinhlobo kanye onobuhle
Kwesitho sangasese inkwethu amaphilisi okuhlela abesifazane ezishibhile futhi ngempumelelo
Ilungiselela iziphuzo kusukela Tarragon ekhaya
Ukudla for namakati neutered
Amaholo ku ngubhuki. Indlela ukunqoba at ubhuki?